Orinasa sy mpanamboatra PC Double-Sided-PCB China | kaz
Ny fampiasana ny hatevin'ny fitaovana dia zava-dehibe ho an'ny fananganana PCBS FR4. Ny hateviny dia refesina amin'ny santimetatra, toy ny an'arivony, santimetatra, na milimetatra. Misy zavatra vitsivitsy hodinihina rehefa misafidy fitaovana FR4 ho an'ny PCB anao. Ireto torohevitra manaraka ireto dia tsory ny fizotran'ny safidinao:
1. Misafidiana fitaovana FR4 manify ho an'ny takelaka fananganana misy teritery eo amin'ny habakabaka. Ireo fitaovana manify dia afaka manohana ireo singa sarotra arahin'asa ilaina amin'ny fananganana ilay fitaovana, toy ny kojakoja Bluetooth, mpampifandray USB, sns. Izy ireo koa dia mety amin'ny tetikasa lehibe izay tian'ny injeniera mifantoka amin'ny volavolan-drakitra mitahiry habakabaka.
2. Ireo fitaovana FR4 manify dia mety amin'ny rindranasa mitaky fahalalahana. Ohatra, ny fampiasana fitaovana manify ho an'ny fiara mandeha amin'ny fiara sy ny PCB ara-pahasalamana dia mety satria ireo PCB ireo
mila miondrika matetika.
Aza mifidy fitaovana manify kokoa ho an'ny famolavolana PCB voahidy, satria mampitombo ny fatiantoka na ny vaky birao.
3. Ny hatevin'ny fitaovana dia mety hisy fiantraikany amin'ny lanjan'ilay takelaka vita pirinty ary mety hisy fiantraikany amin'ny fifanarahan'ny singa koa. Midika izany fa ny fitaovana FR4 manify dia hanamora ny fanamboarana ny takelaka boribory maivana, izay hiafara amin'ny elektronika maivana. Ireo vokatra maivana ireo dia manintona ary mora entina.
Rehefa tsy hampiasa fitaovana FR4 dia tsy safidy mety ny fitaovana FR4 raha toa ka mitaky an'ireto ny fampiharana anao: Fanoherana hafanana tena tsara: FR4 dia tsy soso-kevitra raha PCB no ampiasaina amin'ny tontolo iainana maripana. Ohatra, ny fitaovana FR4 dia tsy safidy mety amin'ny PCB amin'ny fampiharana aerospace.
Welding tsy misy firaka: raha mila PCB mifanaraka amin'ny RoHS ny mpanjifanao dia tokony hampiasaina ny welding tsy misy firaka. Mandritra ny fametahana tsy misy firaka, ny hafanan'ny reflux dia mety hahatratra ny tampon'ny 250 ° C, ary noho ny fanoherana ny hafanana ambany, ny fitaovana FR4
tsy mahazaka azy.
Famantaranandro matetika: Rehefa tratry ny fambara matetika dia tsy afaka mitazona impedance azo antoka ny takelaka FR4. Vokatr'izany dia miseho ny fiovaovana ary mety hisy fiantraikany amin'ny tsy fivadihan'ny famantarana.
Noho ny lazany sy ny fampiasa be dia be, ankehitriny dia mora ny mahita fitaovana FR4 PCB eny an-tsena miaraka amina karazana famaritana sy fiasa. Ny safidy manan-karena toy izany indraindray dia manasarotra ny safidy. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mifanakalo hevitra momba ny zavatra takinao amin'ny mpanamboatra.
4 sosona PCB
FPC board reflexible
telefaonina 0086 755 2778 3365
adiresy Room 502 ~ 503, 26 # Trano, fialamboly HiTech Industrial Park, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Sina, 518103